Arrow၊ Flash ရာသီများသည် Netflix သို့နှစ်များစွာကြာနိုင်သည် - တီဗီ
Arrow, Flash ရာသီသည်ချက်ချင်းပင် Netflix သို့မလာပါ
ပုံ - CW
Netflix က New Releases: အဘယ်သူမျှမ၏မာစတာတနင်္ဂနွေရဲ့အသစ်ဖြည့်စွက်မီးမောင်းထိုးပြ အဘယ်သူမျှ၏ Aziz Ansari ၏မာစတာ Netflix ကအပေါ်ယခုပါ! တီဗီ က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
သတင်းဆိုး, မြှား နှင့် Flash ကို ပရိသတ်တွေ!
Associated Press မှဖော်ပြချက်အရ Time Warner သည် Netflix တွင်တစ်နှစ်လျှင်သူတို့၏ရာသီတစ်ရာသီကိုရပ်တန့်စေပြီး DC Comics ၏ရာသီများကိုစတင်ထုတ်လွှင့်မည့်အသစ်ထွက်ရှိမှုပုံစံကိုစဉ်းစားနေသည်။ Netflix သူတို့တီဗီအပေါ် Premiere ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ။
ယခုအပတ်တွင်ကွန်ဖရင့်တစ်ခုတွင် Time Warner Inc. ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jeff Bewkes ကဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရုပ်ရှင်နောက်ကွယ်မှအကြောင်းအရင်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစိတ်ပျက်စေသည့်တတိယသုံးလပတ်ဝင်ငွေရရှိမှုအစီရင်ခံစာအရသိရသည်။ ရုပ်ပြစာအုပ်အရင်းအမြစ်များ ။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ဤပြပွဲများ၏အတိတ်ကာလကိုကေဘယ်လ်သို့မဟုတ်ဂြိုဟ်တုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေသူများအတွက်ရရှိနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။
သိသာထင်ရှားသည်ကဤသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင် Netflix အတွက်ကြီးမားသောထိခိုက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အခြားကွန်ယက်များအပေါ်မှီခိုနေရဆဲဖြစ်သည်။ Time Warner သည် Netflix တွင်ပြသမည့်ရာသီများကိုထုတ်ပြန်ရန်စိတ်ဝင်စားပုံရသည်။ ထိုအချိန်ကာလများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ဖြန့်ချိမည်နည်းဟူသောမေးခွန်းသာဖြစ်သည်။
Time Warner ဘယ်ကလာတာလဲ။ သူတို့ဟာလူတွေဟာတိုက်ရိုက်တီဗီကိုကြည့်တာ၊ ရှိုးပွဲတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာမျိုး၊ သူတို့ရဲ့ပြပွဲတွေကိုကြည့်ဖို့ On-demand ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးတာမပြုကြတာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်။ CW သည် Big Four (CBS, ABC, NBC, FOX) ကဲ့သို့သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဆွဲမထားပါ။
စောင့်ကြည့်သူတစ် ဦး Netflix ကအသုံးပြုသူအဖြစ် မြှား နှင့် Flash ကို Netflix နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဒီသီချင်းကိုငါကြားခဲ့ရတဲ့အကောင်းဆုံးသတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်၊ ထုတ်လွှင့်မှုများကိုစောင့်ဆိုင်းရန် Warner Bros. နှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောပြissuesနာများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ဒါဟာ Netflix သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းကောင်းစွာအစီရင်ခံခဲ့သည် ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း ဒုတိယရာသီ၏အနိမ့် ratings ပြီးနောက်။ Time Warner မှတန်ဖိုးကိုမမြင်ရပါက၎င်းသည်သူတို့၏ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။
ဤသည်ကြီးမားသောသတင်းဖြစ်သကဲ့သို့, ဒီပြregardingနာနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသတင်းချိုးဖောက်သည့်အခါငါတို့သည်သင်တို့တင်ထားစောင့်ရှောက်မည်။
နောက်တစ်ခု:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးပြသပွဲ ၅၀
အခုအတွက်တော့, မြှား နှင့် Flash ကို Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်အဆင့်တစ်ခုစီ! သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
(ဇ / t ရုပ်ပြစာအုပ်အရင်းအမြစ်များ )
အသစ်သောဖြစ်စဉ်များ Netflix အပေါ်ဘယျအခြိနျ go ကြဘူး
ကြယ်ပွင့်စစ်ပွဲများနောက်ဆုံး jedi netflix လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ
Star Trek ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုမြင်ရဖို့ဘယ်လို
အဘယ်သူမျှမ yaiba ရာသီ2လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ kimetsu
မွေးမြူရေးခြံမှာတကယ်ကိုယ်ဝန်သည် Abby ဖြစ်ပါတယ်
ဂရေဟမ် wardle သူလက်ထပ်သည်